သက်ဆိုင်ရာလစျြလြူရှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားဖွင့်လှစ်ရန်အ pixel ကူညီအလုပ်လုပ်သောစီမံကိန်းများ။ မီဒီယာအာရုံစိုက်, သမားရိုးကျနှင့်အင်တာနက်-based ဆက်သွယ်ရေးကနေတဆင့်အချက်အလက်တွေကိုတစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်ဖြန့်ဝေရောက်ရှိဖို့ကဒီမှာလိုအပ်ပါသည်။ ကင်ပိန်း၏အသီးအသီးစိတျအပိုငျးလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်. ကူညီကြမည်နှင့်အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏မိတ်ဆွေများအားဆင့်ဆိုရမည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေ။
စေးကပ် post ကိုOn 11 ။ ဇန်နဝါရီလ 2021
စေးကပ် post ကိုOn5။ ဇန်နဝါရီလ 2021
စေးကပ် post ကိုOn9။ ဧပြီလ 2020
စေးကပ် post ကိုOn 19 ။ ဇန်နဝါရီလ 2020
စေးကပ် post ကိုOn 17 ။ ဇန်နဝါရီလ 2020
စေးကပ် post ကိုOn 18 ။ ဇန်နဝါရီလ 2019
စေးကပ် post ကိုOn 19 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2018
စေးကပ် post ကိုOn7။ ဧပြီလ 2016
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဇန်နဝါရီလ 5th, 2021အိုလီဗာ Bienkowski